Rimwe rematambudziko akasetsa e-commerce mazuva ano nderekuti hurumende dzese dzemunharaunda dzinoda kusvetukira mubhodhi uye kuraira yavo vega mutero wekutengesa kuti vawane mari zhinji mudunhu ravo. Kubva nhasi, kune anopfuura zviuru gumi nemana zvemitero yemitero muUnited States ine zviuru zvitatu zvemitero yezvigadzirwa. Wepakati munhu ari kutengesa fashoni online haazive kuti iyo fur iyo yavakawedzera kune chimwe chigadzirwa ikozvino inorongedza zvipfeko zvavo zvakasiyana uye inoita iyo kutenga
Chipiri, July 7, 2015 Douglas Karr
Storyworks1 inopa inofambidzana nharembozha yekuratidzira chikuva chekumisikidza timu yako yemunda nematurusi ekubatsira kusimudzira kutendeseka, kuenzanisa nzira yekutengesa nekutengesa kuitiswa, uye kukura hukama hwebhizinesi neicho chaicho-nguva nzwisiso uye data rinoitika. Storyworks1's nyowani Mukana Locator inopa vashandi vekutengesa mumunda kugona kuyananisa nzvimbo yavo yazvino neCRM kuburikidza nharembozha kuitira mepu padhuze netarisiro nenzvimbo dzevatengi nemaprofiles. Iyo Mukana Locator inogadzirisa ruzivo rwakavakirwa pane iyo